Umdali we-'The Watchmen 'ka-Alan Moore's' The Show 'uyiTotal Mindbender futhi ubhekiswe kwi-Blu-Ray - iHorror
Ikhaya Imisebe ye-Blu Umdali we-'The Watchmen 'ka-Alan Moore's' The Show 'uyiTotal Mindbender futhi ubhekiswe kwi-Blu-Ray
Umdali we-'The Watchmen 'ka-Alan Moore's' The Show 'uyiTotal Mindbender futhi ubhekiswe kwi-Blu-Ray
Ubunathi E-Alan Moore
by UTrey Hilburn III September 13, 2021 283 ukubukwa
Abalindi ingenye yamanoveli emifanekiso amahle kunawo wonke ake abhalwa. Ziwubuciko obuphelele. Izincwadi zokulandelela eziholela kuma-HBO's Abalindi series babenobuciko ekuwineni kwabo ngendlela ecishe yadlula yathatha okuqukethwe kwasekuqaleni. Manje, ubuhlakani besikhathi sethu, u-Alan Moore unefilimu entsha esendleleni ebizwa, I-Show. Ukubheka nje lokhu okufundisayo futhi uzobe ugibele umhlaba okhanyayo we-neon okhanyayo olindelwe.
Amazwibela we I-Show kuhamba kanjena:
UFletcher Dennis (Burke), indoda yamathalente amaningi, amapasipoti kanye nomazisi, ufika eNorthampton - idolobha elingajwayelekile futhi elihlaselwe enkabeni yeNgilandi eliyingozi njengaye. Emkhankasweni wokuthola into yokuntshontsha yeklayenti lakhe elisongelayo, uFletcher uzithola ebambeke ezweni lakusihlwa eligcwele ama-vampires, onobuhle abalele, izigelekeqe zeVoodoo, amehlo abucala, kanye nabaphindiseli abazifihle ubuso. Ngokushesha ucwila emgodini omnyama ongajwayelekile futhi omnyama, ofihlwe ngaphansi nje kwaleli dolobha elibonakala lithule. Ngokushesha ngokwanele uFletcher uthola ukuthi amaphupho namaqiniso afiphele futhi kungenzeka kungabe kusaba khona umhlaba wangempela ongabuyela kuwo… Uyemukelwa ku-The Show.
UMitch Jenkins uqondisile I-Show i-Flick eyodwa engajwayelekile. Igcwele uhlangothi angalwazi lukaMoore, futhi ingenye yalawo mafilimu acela ukubukwa amahlandla ambalwa.
Izici ezikhethekile ze Imibukiso i-blu-ray ezayo ifaka i-trailer, “Show Pieces original short films” ne- “Welcome to The Show featurette,” okubandakanya izingxoxo ezikhethekile no-Alan Moore noMitch Jenkins.
I-Show ifika kwi-blu-ray eqala ngoNovemba 23 naku-digital naku-On Demand ukuqala ngo-Okthoba 5.
Ingabe ungumlandeli ka-Alan Moore? Sazise esigabeni sokuphawula.